Maxaad ka ogtahay magaalada xiligan ugu kulul qaarada Yurub ? (Warbixin + Sawiro) – SBC
Maxaad ka ogtahay magaalada xiligan ugu kulul qaarada Yurub ? (Warbixin + Sawiro)
Dad badan oo qaarkood ku nool yihiin qaraada Yurub ama kuwa kale oo si weyn u garanaya cimilada qaarada Yurub ayey dhici kartaa in ay la soo boodi karaan magaalada kugu kulul qaarada Yurub inay ku ka mid noqon karto wadamada Spain, Portugal, Greece, Italy ama Malta, hase yeeshee waxaa la yaab noqon kartaa hadii aad warbixintan aad ku ogaato in mid ka mid ah magaalooyinka wadamada Scandinavian-ka ay tahay magaalada ugu kulul qaarada Yurub. Wadamada Scandinavian-ka sida Sweden, Denmark & Norway ayaa waxay yihiin wadamada ugu qabow marka laga hadlayo cimilada qaarada Yurub iyadoo wadamadaasi xiliga Jiilaalka ama Winter-ka uu ka jiro baraf aad u badan oo ka siyaado ah wadamada kale ee qaarada Yurub.
Hadaba magaaalada Markusvinsa ee ku taal waqooyiga wadanka Sweden ayaa noqotey deegaanka ugu kulul qaarada Yurub xiligan sidaasi waxaa qorey wargeys ka soo baxa wadanka Sweden oo lagu magacaabo TheLocal. Sida uu baahiyey Raadiyaha Sveriges Radio (SR), heerkulka magaaladaasi, & waliba Koonfurta Pajala ee dooxada Torne Valley ayaa gaarety 33.5 degrees .
Anna Hagenblad oo ka mid ah waaxda saadashada hawada ee wadankaasi ayaa sheegtey in labadii sano ee la soo dhaafay ay aad u kordhaysay heerka kulka cimilada Waqooyiga wadanka Sweden. Halkan ka guji warbixinta wargeyska The Local
Juun 15, 2011 at 6:17 am
oo kaalay magaaldasu ma miod bosaaso ka kulul baa maxay tahay inaan lilaahi